SoloCam E20, igwefoto dị n'èzí nke ukwuu si Eufy [Review] | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | 21/07/2021 10:00 | General, Nyocha
Nchedo ụlọ dị ezigbo mkpa n'oge oge okpomọkụ a, ebe, ma ọ bụ ezumike ma ọ bụ oge ezumike, anyị na-ewekarị oge buru ibu pụọ n'ụlọ. Ya mere, ọ dịghị mgbe ọ na-afụ ụfụ iji ohere ọ bụla nke teknụzụ na-enye anyị mee ka anyị chebe onwe anyị ma dịkwa jụụ karịa.
Chọpụta ya na anyị ma chọpụta ihe ike ya bụ na ihe igwefoto Eufy a n'èzí nwere ike ịme, ị ga-atụ uche ya?
2 Ikuku na nchekwa mpaghara
3 Emebere usoro nchekwa
4 Njikọta na ndakọrịta
Ngwaọrụ na-eso usoro akara Eufy na mbụ. Anyị nwere ngwaọrụ akụkụ anọ, elongated, yana gburugburu. N'ihu ihu bụ ebe anyị ga-ahụ ma ihe mmetụta na igwefoto, ebe maka akụkụ azụ nwere njikọ dịgasị iche, dịka nkwado maka mgbidi ahụ. Anyị na-echeta na a haziri ya ma debe ya n'èzí, ya mere mgbidi mgbidi a na-adọrọ mmasị. Ntinye ya dị oke nfe ebe anyị nwere ike ịgbakwunye ya na teepu nwere ihu abụọ, ma ọ bụ na anyị nwere ike ịgha ya ozugbo na mgbidi.
Ibu ibu: 400 grams
Nkwado mkpanaka ahụ nwere mpaghara magnetized dị ntakịrị nke na-amịpụta nke ọma ma na-enye anyị ohere ịme mgbanwe na njem dị ịtụnanya. Na ọkwa nhazi ọ dị mkpa iburu n'uche na anyị na-ekwu maka igwefoto mpụga, yabụ anyị nwere IP65 nchebe megide ihu igwe na-adịghị mma, n'otu ụzọ ahụ ụlọ ọrụ ahụ na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ ziri ezi ma n'ọnọdụ oke ọkụ na ọnọdụ oke oyi, nke anyị na-enwebeghị ike iwepụta. N'akụkụ a, anyị enweghị ike ịkatọ igwefoto na, na-enweghị oke kọmpat, mara ezigbo mma ebe ọ bụla. Nwere ike zụta ya na ọnụahịa kacha mma ozugbo na Amazon.
Ikuku na nchekwa mpaghara
O doro anya na anyị na-ekwu maka igwefoto na-enweghị eriri 100%, ọ nwere batrị na na tiori, n'okpuru ọnọdụ nkịtị, na-enye ọnwa 4 nke nnwere onwe. Maka ebumnuche doro anya anyị enwebeghị ike ịchọpụta ma ọnwa anọ nke nnwere onwe zuru ezu, pMana ụlọ ọrụ ahụ dọrọ anyị aka na ntị na a ga-agbanwe nnwere onwe a dabere na nhazi nke anyị guzobere mgbe ị na-eme ndekọ, yana ọnọdụ ihu igwe. Anyị amataworị na ma ọkụ ma oyi bụ ọnọdụ okpomọkụ nke na-emetụta batrị lithium n'ụzọ na-adịghị mma.
Igwefoto a nwere nchekwa nke mpaghara nke 8GB, anyị na-echeta na ọ na-edekọ ọdịnaya naanị mgbe ihe mmetụta na anyị guzobere "awụlikwa elu", ya mere na 8GB ọ ga-ezuru obere obere obere vidiyo anyị na-echekwa. Iji melite nchebe na nzuzo, igwefoto a nwere usoro nchekwa AES256 na ọkwa nzuzo, a ga-echekwa ihe ndị a maka ọnwa 2, oge nke igwefoto ga-amalite idegharị ha, agbanyeghị, enwere ike ịgbanwe ihe a niile site na ngwa Eufy. Nke a pụtara na igwefoto enweghị atụmatụ ndenye aha ma ọ bụ ụgwọ agbakwunyere na nzụta.
Emebere usoro nchekwa
Ozugbo ị gbanyechara igwefoto, ị ga-enwe ike ịmepụta mpaghara nche abụọ, nke mere na ọ bụghị mmegharị niile nke akụkụ elele na-enye gị ọkwa. N'otu ụzọ ahụ, sistemụ ahụ nwere ọgụgụ isi, n'ụzọ dị otú a ọ ga-eme ka onye ọrụ ahụ mata mgbe naanị "onye mwakpo ahụ" na-ala n'ụlọ, ọbụna na-achọpụta ma ọ na-ezo ma ọ bụ na-aga ije anụ ụlọ. Ihe ngosi ahụ bụ ozugbo ka anyị nwee ike ịchọpụta, ihe dị ka sekọnd atọ bụ oge ole ọ ga - ewe maka igwefoto iji chọpụta mmegide ahụ na - egosi ma gosipụta njikere na ngwaọrụ mkpanaka gị
Full HD 1080p ndekọ usoro
Ọ bụrụ na anyị ejiri sistemụ rụọ ọrụ, igwefoto ga-ewepụta ụda "mkpu" nke ruru 90 dB, nke na-adịghị enye nnukwu arụmọrụ zuru oke na ọkwa mkpọtụ, mana ọ ga-abụkwa ihe na-akpasu iwe maka onye na-awakpo ya. Nke a nwere ike ịbụ nchebe gbakwunyere. N'otu ụzọ ahụ, igwefoto nwere usoro ọhụụ nke abalị site na ndị ọkụ infrared nke na-enye ohere ka njirimara ziri ezi nke isiokwu dị anya ruo mita asatọ. Na ọgụgụ isi nke Eufy igwefoto na-ekwe nkwa 8 ugboro ngwa ngwa iji chọpụta isiokwu ndị na-awakpo ma na-enye 5% Mbelata ụgha mkpu.
Njikọta na ndakọrịta
Nke mbu, igwefoto a nwere nnabata zuru oke na abuo n’ime ndi enyemaka na akwado ya na ahia, Anyị na-ekwu n'ụzọ doro anya nke Amazon Alexa na Google Assistant, nhazi ahụ dị mfe site na ngwa ahụ ma njikọ ahụ dị ozugbo Ozugbo anyị ejikọtara igwefoto na otu netwọk WiFi ahụ anyị ahazi, na nke anyị, anyị enyochala na Alexa ntinye ahụ dị mfe ma zuru oke. Nlekọta nke ngwa Eufy nke aka ya, nke dị maka iOS na gam akporo bụ mkpokọta, Ọ na-enye anyị ohere ịhazigharị akụkụ ahụ, jikwaa ihe ngosi, lee ọdịnaya ntanetị ma mara ọkwa nke batrị ugbu a n'etiti ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. Anyị enweghị ihe ọ bụla.
Ọrụ ọzọ nke ngwa a bụ ohere nke iji ọkà okwu jikọtara na igwefoto, ya bụ, anyị ga-enwe ike ịhụ na ezigbo oge ihe na-eme wee kwuo okwu n'akụkụ abụọ, ya bụ, itinye ozi n’iko na iwere ha n ’igwe okwu gị. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ihe atụ ụmụaka nọ n'ogige ahụ, anyị nwere ike ịdọ ha aka ná ntị na oge eruola ịla n'ụlọ ozugbo site na igwefoto na enweghị nsogbu ọ bụla, ọbụnakwa mee ka ọnọdụ dị iche iche dị na nwoke nnyefe Amazon.
Ihe na: 21 2021 XNUMX
Igwefoto Eufy zuru oke, yana nguzogide egosipụtara mgbe ọ nọ n'èzí na enweghị ụgwọ agbakwunyere. Ihe Eufy na-enye, karia uru ego ya bara, bụ ogologo oge nke ngwaahịa ya na ọrụ ndị ahịa ama ama.Elu nchekwa nke SoloCam ...ọ bụ ezie na ọ na-abụkarị ọ na-enwekarị mbelata nke 10% n'oge obere, yabụ anyị na-atụ aro ka ị na-elebara nsonaazụ ahụ na webụsaịtị mbụ. I nwekwara ike ịlele ngwaọrụ na ya ukara website.
Nnọọ ihe ịga nke ọma na imewe
Usoro Mbido ahụ na-ada ada mgbe ụfọdụ
Ogologo WiFi abụghị nke sara mbara
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » SoloCam E20, igwefoto dị n'èzí nke si Eufy [Nyocha]